Niantso anay | MNVJ
Historique de NAHITA NY VONINAHITRY JESOSY
NIANTSO ANAY JESOSY
. Mahagaga ry havana ny fomba fiantsoan’Andriamanitra antsika tsirairay avy. Hafa mihitsy ny niantsony an’i Paoly raha teny am-panenjehana ny fivavahana kristiana izy no nifanena taminy i Jesosy. Hafa mihitsy ny niantsoany an-dry Petera sy Jaona sy ry Matio raha teny am-perinasa izy no nifanena taminy Jesosy dia navelany niaraka tamin’izay ny fananany rehetra dia nanaraka Azy izy. Hafa mihitsy ny niantsoan’ny Tompo an-dry Marie Magdalena fa teny amin’ny filalaovan-dratsiny izy no nanafaka azy ny Tompo ary nanapa-kevitra ny hahafoy ny zavatra rehetra izy ka nanaradia an’Andriamanitra. Hafa mihitsy ny niantsoan’ny Tompo an-dry Zakaiosy fa nangetaheta te hahalala an’izany Jesosy izany indrindra izy ary nanao izay fomba rehetra hahitany na dia ny tavan’ny Tompo fontsiny ihany aza kanjo efa ela Andriamanitra no nitady azy ary noho ny aminy fotsiny no nahatongavan’ny Tompo Jesosy tao Jeriko hitady azy.
Fa izahay koa dia toa mitovitovy karazana toy izany. Ny azonay antoka dia niantso anay tsirairay avy Jesosy tany amin’ny toerana samihafa ary toa mifanalavitra akory aza nefa notendren’ny Tompo hiray safidy sy hiray asa dia ny hanaraka Azy ary hanao izay tiany atao.
Rehefa samy niboiboika tao anatinay tsirairay avy tao ny hetaheta lalina te hitory sy hanambara ny fitiavan’i Jesosy anay dia nifidy vanim-potoana lehibe Andriamanitra dia ny faha 15 septembre 2013 ka teo no nananganan’i Jesosy amin’ny fombany ny MINISTERA NAHITA NY VONINAHITRY JESOSY. Ny tanjona dia ny hiara-manompo sy hitory hatrany am-paran,ny tany